२३ गतेबाट खुल्ने भयो ज्योती लाइफको आइपिओ, कस्तो छ कम्पनी? कति कित्ता भर्ने? – Eps Sathi
२३ गतेबाट खुल्ने भयो ज्योती लाइफको आइपिओ, कस्तो छ कम्पनी? कति कित्ता भर्ने?
February 26, 2021 1389
ज्योती लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले फागुन २३ गतेबाट सर्बसाधारणका लागि आइपि‌ओ निष्काशन गर्ने भएको छ। यो आइपिओ २८ गतेसम्म खुल्ला रहने छ भने पूरा नबिकेमा चैत्र ८ गतेसम्म समय थप गरिनेछ। आइपिओ पूरा बिक्री नहुने सम्भावना एकदमै न्युन भएकाले यो आइपिओ फागुन २८ गतेसम्म खुल्ला रहनेछ।
ज्योती लाइफले कम्पनीको जारी पूँजीको ३० प्रतिशत सेयर आइपि‌ओ निष्काशनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। धितोपत्र बोर्डले फागुन ७ गते आइपिओ निष्काशनका लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो। यस कम्पनीको आइपिओ निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल रहेको छ।
कम्पनीको जारी पूँजी २ अर्ब २० करोड रहेको छ जसमध्ये ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ६६ लाख कित्ता सेयर आइपिओबाट बिक्री गरिदै छ। आइपिओ बिक्री पछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६६ करोडले बृध्दि हुनेछ। ६६ लाख कित्तामध्ये ३ लाख कित्ता ३० हजार कर्मचारी र ३ लाख ३० हजार कित्तानै म्युचुअल फन्डहरुलाई छुट्याइएको छ। बाँकी ५९ लाख ४० हजार कित्ताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले न्युनतम १० कित्ता तथा अधिकतम ६६ हजार कित्ताका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन्। आइपिओ सजिलै ओभरसस्क्राइब हुने हुँदा १० कित्ताका लागि आवेदन गर्नु वेश हुन सक्दछ।
यो आइपीओलाई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले ‘केयर एनपी त्रिपल बी इस्यूअर रेटिङ प्रदान गरेको छ। यो रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमता मध्यम रूपमा सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ। हाल ज्योतिको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छ। आइपीओ बिक्री गरिसकेपछि पुँजी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ज्योति लाइफले १० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । जगेडा कोषमा ४८ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । हाल यसको प्रतिसेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ (वार्षिक) र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३४ रुपैयाँ ८१ पैसा छ।
Prevएप्पलका ग्राहकलाई खुशीको खबर, एप्पलले खोल्यो कोरियामा दोश्रो स्टोर
Nextपहिलो दिन कोरियामा १८ हजार ५०० ले लगाए कोरो ना खो’प
कन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालीकाले मौषमी कामदार कोरिया पठाउँदै? कस्तो भिजा हो यो? जानौं
आफ्नै साथीलाई मा’रे:र उत्तर कोरिया भाग्न खोज्ने श्रीलङ्कन कामदारलाई २० बर्ष जेल सजा’य